बिदेश बाट फर्किनेका लागि विमानस्थलमा नयाँ नियम ! • raradiodarpan.com
बिदेश बाट फर्किनेका लागि विमानस्थलमा नयाँ नियम !
को’भिड संकट रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दुई वर्ष अघिबाट नेपाल आगमनसम्बन्धी लागू गरिएका सबै प्रावधान खारेज गर्दै नयाँ ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी गरिएको छ ।
अब विदेशबाट आउँदा कोरोना परीक्षणको ने’गेटिभ पीसी’आर रि’पोर्ट वा पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको कार्ड पेस गरे पुग्ने भएको छ । त्यस्तै विदेशबाट नेपाल आउँदा तोकिएको क्वा’रेन्टाइन बस्नुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले विदेशबाट आउनेका हकमा जारी गरिएका जनस्वास्थ्यसम्बन्धी यसअघिका सबै प्रावधान खारेज गरिएको बताए ।
‘अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुबाट नेपाल आउँदा पूर्ण मात्राको खोप लगाएको हुनुपर्ने वा पीसीआर नेगेटिभ पेस गरे पुग्ने छ । यसबाहेक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका सबैलाई प्रवेशका लागि अनुमति दिइने छ,’उनले भने ।
यो पनि…मलेसिया लामो समय देखी बस्दै आएका श्रमिकका लागि यस्ता सुविधा पाउनेछन् !
सरकारले सबामा विदेशीहरूका लागि खास कार्ड जारी गर्ने विचार गरिरहेको छ, गृहमन्त्री दतुक सेरी हमजाह जैनुदिनले भने। उनले भने कि कार्ड जारी गर्न सबाह राज्य सरकारले गृह मन्त्रालय (KDN) लाई प्रस्ताव गरेको थियो। पुत्रजया : सबाह सरकारले परिचयपत्र नभएका तर लामो समयदेखि राज्यमा बसोबास गरेका विदेशीलाई विशेष कार्ड दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
सबाको प्रस्तावलाई राम्रो भएको बताउँदै गृहमन्त्री दातुक सेरी हमजाह जैनुदिनले यद्यपि यो कार्ड नागरिकता वा स्थायी बासिन्दाको हैसियत प्रदान गर्ने होइन, बरु राज्यमा संलग्न समूहको ठेगाना पत्ता लगाउनको लागि जोड दिए।
यो प्रस्ताव सबाह राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव गरिएको थियो र आज Sabah (JKPWAS-INDUK) मा विदेशी व्यवस्थापन को लागि मुख्य समिति को पहिलो बैठक मा पनि छलफल भएको थियो। ‘सबाहको समस्या निकै गाह्रो छ, उनी (विदेशी) लामो समयदेखि बसेका छन् र यदि उसले फिर्ता पठाउने हो भने उनी ३० वर्षदेखि यहाँ बसेका छन् र यहाँ तीन–चार पुस्ता भइसकेका छन् ।
“यी विदेशीहरूमध्ये कतिपयलाई आफ्नो गाउँ कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन। उनीहरूसँग कुनै पनि कार्ड छैन, कागजात छैन र त्यसैले हामी उनीहरूसँग विदेशीहरूको कार्ड समन्वय गर्न चाहन्छौं, ताकि हामी उनीहरू विदेशी हुन् भनेर पुष्टि गर्न सकौं।
“परिणामस्वरूप, बैठकले यी विदेशीहरूको पुन: दर्ताका लागि यो वैशाखमा कार्ड जारी गर्न सक्षम बनाउन अनुरोध गरेको छ,” उनले आज गृह मन्त्रालयमा JKPWAS-INDUK को अध्यक्षता गरेपछि भने। साबाहका मुख्यमन्त्री दतुक सेरी हाजीजी नूर पनि उपस्थित थिए।
हमजाहले भने कि विदेशीहरू सबामा धेरै लामो समयदेखि बसेका कारण भविष्यमा समस्याहरू कम गर्ने उद्देश्यले कार्ड जारी गर्न लागुएको हो। “यदि उहाँको आफ्नै बुबाले आफ्नो पहिचान थाहा छैन भने, उहाँका सन्तानहरूको पछि के हुन्छ। त्यसैले कार्डबाट, कम्तिमा उनीहरूलाई रोजगारी दिन र बच्चाहरूको स्कूलको शुल्क तिर्न सक्षम हुन सक्छ।
“हामीले भविष्यमा के गर्नुपर्छ, त्यहाँ अलिकति मानवता हुनुपर्छ। हामी सबाहका मानिसहरूलाई सताउने समस्याहरू एक्लै छाडियोस् र भविष्यमा अझ खराब हुन चाहन्छौं,” उनले भने।